Doorashada Kursi ka mida Aqalka Sare oo ka bilaabtay Jowhar iyo Senatorkii oo ka haray tartanka - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Doorashada Kursi ka mida Aqalka Sare oo ka bilaabtay Jowhar iyo Senatorkii oo ka haray tartanka
Waxaa magaalada Jowhar goor dhow ka bilaabtay Doorashada kursi ka mida Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka, kaasoo hore muran uga dhacay, balse dib loogu soo celiyey Jowhar xildhibaannadii gadooday.
Tartanka Kursiga Besha Jajeele ayaa u dhaxeeya musharixiinta kala ah: Xasan Iidow Kobac, Senator Cusmaan Axmed Macow iyo C/nuur Ibraahim Farreey, laakiin inta aan la bilaabin doorashada waxaa tanaasulay oo tartanka isaga haray senatoorkii difaacanayey kursiga.
Senator Cusmaan Axmed Macow ayaa sheegay inuu markii hore ka carooday doorshada, Muqdisho aaday, balse uu keligiis dib u soo laabtay, isla markaana uu ka tanaasulay tartanka kursigii uu ku fadhiyey, isagoo sheegay inuu ka leexday Daad socda si da uu yiri.
Doorashada ayaa u dhaxeysa dhaceysa Musharixiinta kala ah: Xasan Iidow Kobac iyo C/nuur Ibraahim Farrey, waxaana kulanka ku sugan 88 xildhibaan, iyadoo qaar ka mida xildhibaannadii Xalay rabshada ka sameeyay doorashada laga mamnucuay inay fadhiyada Baarlamaanka ka qeyb galaan.
Waxaa si weyn loo sadaaalinayaa inuu doorashadan ku guuleysto ganacsade Xasan Kobac oo dhaqaale badan ku bixiyey hanashada kursigan, isla markaana taageero ka heysta dhinacyada kala duwan ee madaxda Hirshabelele iyo xildhibananada Baarlamaanka.
Previous articleAlshabaab oo Qaraxyo ku burburiyey Dhismihii Garoonka Magaalada Buuloburte
Next articleJOWHAR: Ganacsade Wareeggii koowaad ku guuleystay kursigii la isku qabtay ee Aqalka Sare